Ahoana ny fijerena ny fahasalaman'ny bateria iPhone - Victor Mochere
Zoma, Jona 24, 2022
Ahoana ny fomba hijerena ny fahasalaman'ny bateria iPhone
Raha mahatsapa ianao fa tsy mitsahatra ny mamaha ny iPhone na mitily foana ny fivoahana hidirana dia mety hiharatsy ny fahasalaman'ny bateria findainao. Soa ihany, Apple manana fitaovana namboarina hampahafantatra anao tsara raha mieritreritra bateria mandao haingana ianao na raha tena ho faty ny findainao. Ny fahazoana ny fahombiazan'ny baterinao dia mety hisakana anao tsy handatsaka vola be hanombohana telefaona vaovao. Azonao atao ny mampiasa ny ankamaroan'ny zavatra iasanao amin'ny alàlan'ny fitsaboana ny bateria tsara ary fampiharana fika sy toro-hevitra vitsivitsy.
Ity ny fomba hijerena ny mombamomba ny bateria iPhone anao.
Mankanesa any amin'ny 'Settings'
Sokafy 'Battery'. Ho hitanao ny fihenan'ny fotoana nampiasanao ny baterinao ary ny fampiharana izay mampiasa ranom-boankazo betsaka indrindra. Azonao atao ny mijery ireo 24 ora lasa na 10 andro lasa izay
Misy ihany koa ny fizarana antsoina hoe 'Health batterie'. Tsindrio izany raha hamakafaka haingana ny fampiasana ny baterinao taloha
Arakaraky ny maha-100% anao no mahatsara anao. Ny fahaiza-manao ambany dia mety hiteraka ora vitsy hampiasana eo anelanelan'ny fiampangana. Na dia manana ambany noho ny 100% fahaizanao ianao dia afaka miasa ihany amin'ny fampisehoana tampony. Eo ambanin'ny 'fahasalaman'ny bateria' dia ho hitanao raha mbola afaka miasa toy ny mahazatra ny bateria na tsia. Raha ity farany no izy dia mety ho hitanao amin'ny iPhone ny sasany amin'ireto olana ireto, toy ny; fotoana fandefasana fampiharana lava kokoa, fanodinkodinana miadana kokoa, fanamaivanana ny jiro aoriana, alàlan'ny haavon'ny mpandahateny ary fampiharana miadana kokoa Zahao ireo torohevitra momba ny fomba fitazonana ny fahasalamanao bateria iPhone.
Maninona i Google no manolotra ny serivisiny maimaim-poana
Ahoana no hitazomana ny fahasalaman'ny bateria iPhone